ယနေ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ လေလံပစ်တဲ့ အင်တာနက် နယ်မြေကြီးကို လက်ဝါးကြီးအုပ် ခြုံလွှမ်းထားတဲ့ eBay ဆိုတဲ့ အရာကို မွေးဖွားဖို့ Pierre Omidyar က သူ့အသက် ၂၈နှစ်မှာ ခရီးတစ်ခုထွက်တုန်း computer code (ကုဒ်) တွေကို ရေးဆွဲခဲ့တယ်။ အင်တာနက် ဆိုတဲ့ နေရာကြီးက တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူတွေ တစ်နေရာထဲမှာ ရောင်းတဲ့လူက သူတို့ရဲ့ အောက်ခြေဈေးကို သတ်မှတ်၊ ၀ယ်တဲ့ လူတွေကလည်း ထိုက်တန်တဲ့ ဈေးနှုန်းကို လေလံပစ်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ အင်တာနက် လေလံ ရပ်ဝန်းလို့ Omidyar က ထင်မြင်ခဲ့တယ်။ နောက်ထပ် ရောင်းသူနဲ့ ၀ယ်သူတွေ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အပြန်အလှန် Rating လုပ်တယ် ဆိုတဲ့ တစ်ခုခု အရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်ပြီး သွားတိုင်း လိမ်ညာမှုတွေ တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ချပေးတဲ့၊ Novel Feedback စနစ်ကြီးက eBay ရပ်ဝန်းကို Fraud ဆိုတဲ့ လိမ်ညာမှုတွေကို အနည်းဆုံးအထိ လျော့ချပေးနေတယ်။ eBay ကို မွေးဖွားပေးခဲ့သူ Pierree Omidyar က "လူတစ်ဦးစီတိုင်းကို ထုတ်လုပ်သူ တစ်ဦးရဲ့ အစွမ်းကို ပေးနိုင်ဖို့ သူ ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်၊ ဒါမှ လူတိုင်း လူတိုင်းက Community (ရပ်ဝန်း) တစ်ခုကို ဆောက်လုပ်ဖို့ တာဝန်တွေ နားလည်ပြီး ယူတတ်လာမယ်" လို့ ရှင်းပြခဲ့တယ်။
Aution Website ကို Aution Web ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ၁၉၉၅ စက်တင်ဘာ ၄ရက်နေ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ Labor Day ၌ စတင် သန္ဓေတည် လာပါတော့သည်။ မကြာမီမှာပဲ Echo Bay Omidyar's consulting firm ဆိုတာကို အတိုချုပ်ပြီး eBay.com လို့ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
Pierre Omidyar ရဲ့ လေလံ Website ကြီးဟာ ခိုင်မာပြီး စနစ်ကျကျ ယုံကြည်မှု၊ တရားမျှတမှုတွေနဲ့ တည်ဆောက် ထားတဲ့ နယ်မြေ တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဓာတ်ပုံ ကျောင်းသား တစ်ဦးက အသုံးပြုပြီးသား ကင်မရာ တစ်လုံးကို တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ များလှစွာသော Camera models တွေထဲမှ ကင်မရာတွေကို စိတ်တိုင်းကျ ယုံကြည်စွာဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး အချိန်မှန်မှန် ပစ္စည်းကို နေအိမ်ကနေ လက်ခံရယူ နိုင်တယ်။ အိမ်တွင်း စီးပွားရေး အနေနဲ့ အိမ်မှာ ချုပ်လုပ်ထားတဲ့ အ၀တ်အထည်တွေကို တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ ၀ယ်ယူသူတွေထံ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်တယ်။ မဟုတ်မမှန် လိမ်ညာတဲ့ လူတွေကို eBay ရပ်ဝန်းက Rating System, Novel Feedback System ဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြီး ဈေးကွက်မှ အပြီးအပိုင် ပိတ်ပင် လိုက်မည် ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးချင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်သူတွေ၊ ရောင်းသူ တွေက eBay မှာ တစ်စနှင့် တစ်စ နေရာ ယူလာကြတယ်။ ACNielsen International Research ရဲ့ လေ့လာမှု အရ ယခုအခါ လူတစ်သန်းကျော်က သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀ကို eBay မှာ အရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးနေကြောင်း၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်က လူ ၇သောင်း ၅ထောင်သာ ရှိခဲ့ကြောင်း ပြသခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ အဓိက ရောင်းဝယ်သူတွေ အပြင် အခြား လူ တစ်သန်းခွဲ ကျော်ကလည်း eBay မှာ ရောင်းဝယ်ခြင်းဖြင့် supplemental ၀င်ငွေကို ရှာဖွေနေကြတယ်။
Omidyar စတင် မွေးဖွားခဲ့တဲ့ eBay ဆိုတဲ့ ရပ်ဝန်းဟာ သုံးနှစ်အတွင်းမှာ စတောပ့် တန်ဖိုး ဘီလီယမ် ဒေါ်လာ နှစ်သန်းအထိ တိုးပွားခဲ့တယ်။ ၁၉၉၆ မှာ Standford University ကနေ MBA ရရှိခဲ့တဲ့ Jeffrey Skoll က eBay ကို ၀င်ရောက်ခဲ့တယ်။ ၁၉၈၈ မတ်လမှာ Meg Whitman က eBay ရဲ့ president and CEO ဆိုတဲ့ ရာထူးကို ရယူခဲ့တယ်။ ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာမှာတော့ eBay ဟာ IPO ဆိုတဲ့ Initial Public Offering ကို စတင် ကျင့်သုံးရာ Omidyar ရော Skoll ကိုပါ ဘီလံယံနာများ အဖြစ် အသွင်းပြောင်းပေးခဲ့တယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာတော့ eBay ရဲ့ ရှယ်ယာ မီလီယမ် ၂၁၄ ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ရှစ်ဘီလီယမ် အထိ တန်ဖိုး ပေါက်ခဲ့တယ်။
Collaborating with eBay
eBay ဟာ တစ်ချိန်ထဲမှာ Marketplace, Payment, Communication အစရှိတဲ့ ကုမ္မဏီတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး eBay ရပ်ဝန်းက လူတွေကို ပိုပြီး ကောင်းတဲ့ Service ၀န်ဆောင်မှုတွေ ဖြည့်စွက်ခဲ့တယ်။
Marketplace - The U.S. Postal Service
eBay မှာ ရောင်းသူတွေက ၀ယ်သူတွေထံ ပစ္စည်းတွေ ပို့ပေးဖို့ အရေးကြီးတဲ့ လိုအပ်ချက် တစ်ခုကို eBay က အမေရိကန် ဆက်သွယ်ရေး U.S. Postal Service (USPS) နဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့တယ်။ USPS ရဲ့ First class mail ပထမတန်း စာပို့စနစ် က ထိုအချိန်မှာ ဈေးတက်မှုတွေနဲ့ အတူ အသုံးပြူသူတွေ လျော့နည်းနေတယ်။ အီးမေးလ်နဲ့ ဖက်စ်တွေ ကြောင့် စာပို့တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ကျဆင်းခဲ့ရာမှာ ကုန်ကျစရိတ်တွေ တက်နေခဲ့တယ်။ eBay နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အိမ်တိုင်ရာရောက် ရောင်းသူတွေ ထံမှ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို လာယူပြီး ၀ယ်သူတွေ ထံ ပေးပို့ခြင်း၊ စာပို့ဗူးများ အလကား ပေးခြင်း၊ ညတွင်းခြင်း ပို့ဆောင်မှုများ အတွက် heavy-duty စာအိတ်များ ပေးခြင်း၊ တံဆိပ်ခေါင်းများက အိမ်၌ မိမိ ကွန်ပျူတာများမှ Printing လုပ်နိုင်ခြင်း၊ အစရှိတဲ့ ပူးပေါင်းမှုများကို eBay ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ခုနှစ်မှာ eBay မှ သန်း ၂၀ကျော် တံဆိပ်ခေါင်း (Shipping Labels with postage) များကို Print လုပ်ခဲ့တယ်။
ငွေချေရာမှာ လျင်မြန် အဆင်ပြေ ချောမွတ်စေဖို့ ၁၉၈၈ မှာ Paypal ဆိုတဲ့ ကုမ္မဏီကို eBay မှာ တည်ထောင်ခဲ့တယ်။ ရောင်းသူနဲ့ ၀ယ်သူကြားမှာ လျင်မြန်စွာ အလွယ်တကူ ပိုက်ဆံ အလွှဲအပြောင်း လုပ်ဖို့ လက်ခံရယူဖို့ အတွက် Paypal က ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်။ Paypal က ရှိနေပြီးသား ဘဏ်အကောင့်တွေ၊ Credit Card တွေကို အခြေပြုပြီး၊ ကမ္ဘာ့ စနစ်အကျဆုံးဖြစ်တဲ့ Fraud prevention လိမ်ညာမှု ကာကွယ်ခြင်း စနစ် နည်းပညာတွေ အသုံးပြုပြီး လုံခြုံ၊ စိတ်ချ၊ တိကျ၊ မှန်ကန်တဲ့ ငွေပေး ငွေယူ စနစ် တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့တယ်။ မကြာခင်မှာပဲ Paypal က နိုင်ငံတကာ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အင်တာနက် ငွေချေစနစ်ကြီးရဲ့ အကြီးမားဆုံးသော ဦးဆောင်သူ တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အခုအခါမှာ သုံးစွဲသူပေါင်း သန်း တစ်ရာ ကျော် ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၅၅ နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ရောင်းသူတွေ၊ ၀ယ်ယူသူတွေ၊ အင်တာနက် စီးပွားရေး သမားတွေ၊ အင်တာနက် လုပ်ငန်းရှင်တွေ အားလုံး ယုံကြည်စွာ သုံးစွဲနိုင်တဲ့ စနစ်တစ်ခု အဖြစ် ယနေ့ ကမ္ဘာမှာ ရပ်တည်နေတယ်။
Communication - Skype
Skype ဆိုတဲ့ အင်တာနက် ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္မဏီရဲ့ လူတွေ ကို အခမဲ့ အတိုင်းအဆမရှိ စကားပြော ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ Skype Software ဟာ သြဂုတ်လ ၂၀၀၃ မှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံပေါင်း ၂၂၅ မှာ၊ သန်းပေါင်း တစ်ရာ့ခြောက်ဆယ်ကျော် Download လုပ်ခံ ခဲ့ရတဲ့ Skype က ၄၄ မီလီယမ်ကျော် Registered Users ရှိတယ်။ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၅ မှာ eBay က Skype ကို ဒေါ်လာ ၂.၆ ဘီလီယမ်ဖြင့် ရယူခဲ့တယ်။ eBay ရဲ့ ရောင်းသူနဲ့ ၀ယ်သူကြားက ဆက်သွယ်ရေးကို ပိုပြီး အထောက်အကူ ပြုပေးဖို့ တိုးတက်စေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၀ယ်ယူခဲ့တယ်။
Communication ဆိုတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဟာ အင်တာနက် အရောင်းအ၀ယ် နယ်ပယ် ရပ်ဝန်းအတွက် အင်မတန် အရေးပါတဲ့ အကိုင်းအခတ် တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ထိပ်သီး လေလံ ရပ်ဝန်း eBay နှင့် ကမ္ဘာ့ထိပ်သီး ငွေပေး ငွေယူ စနစ် Paypal တို့ကို ကမ္ဘာ့ထိပ်သီး ဆက်သွယ်ရေး Skype ဖြင့် ပေါင်းစည်းလိုက်သည့် အခါမှာ အင်မတန် အစွမ်းထက်တဲ့ အင်တာနက် စီးပွားရေး နယ်မြေတစ်ခုကို တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း eBay ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Meg Whitman မှာ ပြောကြားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် Skype ကို ၀ယ်ပြီးပြီးခြင်း တစ်လအတွင်းမှာ Skype ရဲ့ အားနည်းချက်ကြီး နှစ်ခု ကို သတင်းဌာန တစ်ခုမှာ ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ရာ၊ Hackers တွေက ၀င်ရောက်ပြီး တိုက်ခိုက်နိုင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ရောင်းသူတွေ နဲ့ ၀ယ်သူတွေကို Skype ကို သုံးစွဲဖို့ နောက်ဆုတ်ခဲ့ကြသည်။ Skype ရဲ့ Network Security ပြဿနာများကြောင်း eBay အတွက် Paypal နဲ့ U.S Postal Service လို ထိရောက် အစွမ်းထက်တဲ့ Collaboration Tool တစ်ခု ဖြစ်မလာခဲ့ပါ။
eBay.com ဟာ အရင်တုန်းက အသက် ၂၅ ၀န်းကျင်သာ ရှိတဲ့ Pierre Omidyar ရဲ့ အကြံတစ်ခုသာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အကြံတစ်ခုကို အသက်သွင်းပြီး စနစ်တကျ ပြင်ဆင်မှု၊ အကျိုးရှိရှိ သုံးချနိုင်တဲ့ စနစ်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးနိုင်မှု တွေကြောင့် eBay.com ဟာ ယနေ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း လေလံ နယ်မြေတစ်ခုလုံးကို ထိပ်ဆုံးကနေ လွှမ်းမိုး ပြေးလွှားနေတဲ့ ရပ်ဝန်း ၀န်ဆောင်မှု တစ်ခု ဖြစ်နေပါပြီ။ တကယ်တော့ တီထွင်မှု၊ ဆန်းသစ်မှု၊ နည်းပညာ တွေက စီးပွားရေးရဲ့ အခြေခံ နိယာမ သော့ချက်တွေပင် မဟုတ်ပါပေလော။ တိကျ မှန်ကန် အစွမ်းထက်တဲ့ စနစ်တစ်ခုကို အသက်သွင်း ပေးနိုင် ဖို့က ကြိုးစား အားထုတ် စွမ်းဆောင်မှု၊ ကံတရား နဲ့ အရည်အချင်းတွေ ပေါ်မှာပင် မူတည်ပါပေသည်။
Source: Business Driven Technology, and Wikipedia
ရေးသားသူ Tea at 4:08 AM5တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် Article, Business, eBay, စီးပွားရေး, ဆောင်းပါး
Myhome16 presents youatrue "Valentine Story" by ထာဝရ
ကျွန်မရဲ့ တစ်စဆီ ကွဲသွားခဲ့တဲ့ အသဲ အပိုင်းအစလေး တွေကို ဆက်ပြီး ရေးထားတဲ့ ကို့ အတွက် ချစ်သူများနေ့ လက်ဆောင်။
ကျွန်မလေ ကိုနဲ့တွေ့ပြီးမှ ချစ်သူများနေ့ကို မက်မောမိတာ အမှန်ပါ။ ချစ်သူများနေ့ ဆိုတာ အလွန်တရာကို ကြည်နူး ပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းတယ်လို့ မှတ်ချက် ချရလောက်အောင် ဖန်ဆင်း ပေးခဲ့တဲ့ ကို့ကို ကျွန်မ ထာဝစဉ် ကျေးဇူးတင် နေမှာပါ။ အလုပ်တွေ များတဲ့ ကြားက၊ ကို့ရဲ့ အစ်ကို လုပ်သူက မသွားစေချင် သော်လည်း၊ မိုင် ၃၀၀ ကျော် ဝေးတဲ့ ခရီးစဉ်ကို ကျွန်မကို တွေ့ချင်တာ တစ်ခုထဲနဲ့ ကိုတစ်ယောက်တည်း ကားမောင်းပြီး လာတွေ့ ခဲ့တဲ့ အရင်နှစ်က ဖေဖော်ဝါရီ တစ်ဆယ့်လေး ကို ကျွန်မ ဒီတစ်သက် မေ့မရ နိုင်တော့ဘူး။ မနက် ရှစ်နာရီ ရောက်ပြီလို့ သတိပေးတဲ့ နာရီသံလေး ကြားလိုက် ချိန်မှာတော့ ကိုက ကျွန်မရဲ့ မြင်ကွင်းရှေ့ကို ရောက်နှင့်နေပြီ။ ကို့ရဲ့ ချိုမြိန်လှတဲ့ အပြုံးလေး တစ်ချက် အောက်မှာ ကျွန်မရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကလည်း နာရီသံချက် တွေနဲ့ အပြိုင် စည်းချက်တွေ အတူ တီးခတ် ခဲ့တယ်။
လူကြီးတွေ အနားမှာ မရှိခိုက် ဆိုတော့လဲ ကို့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲ အလျင်မမြန် ပြေးဝင်မိတယ်။ မတွေ့တာကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ ချစ်သူ့ရင်ခွင်ထဲက ရင်ခုန်သံတွေကို နားဆင်နေတုန်းမှာပဲ အနောက်က ခြေသံတွေ ကြားလို့ ကို့လက်ကို ဆွဲပြီး အိမ်က ထွက်လာ ခဲ့တယ်။ ခဏကြာမှ အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ကိုနဲ့ အပြင် ထွက်သွားတယ်၊ ပြန်လာတာ နောက်ကျမယ် ဆိုတာ စိတ်မပူဖို့ ပြောပြီး ဖုန်းပိတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီနေ့က မှတ်မှတ်ရရ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ခုမှာ အလှူပွဲတစ်ခု ရှိတယ်။ ပြီးတော့ ချစ်သူကို တွေ့ချင်စောနဲ့ ဒီနေ့ ဘယ်သွားမယ် ဆိုတာ ကြိုတင် မစီစဉ် ထားမိတဲ့ ကျွန်မရဲ့ အမှားကြောင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပဲ အရင် ဦးတည်ခဲ့တယ်။ လမ်းတစ်လျှောက် မီးနီချိန်တိုင်းကို စောင့်မျှော် နေမိတာ ကိုနဲ့ကျွန်မ မှတစ်ပါး ဘယ်သူက သိနိုင်မှာလဲ။ မီးနီ သွားတိုင်း သွားတိုင်း၊ ဒီတစ်သက် ကျွန်မ မမေ့နိုင်မယ့် အနမ်းလေးတွေ ရလိုက်တိုင်း၊ ကျွန်မ အသက်ရှုသံတွေ ရပ်ရပ် သွားခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ရောက်သွားတယ်။ မုန့်တွေကတော့ အများကြီးပ၊ဲ ဒါပေမယ့် ကိုက မုန့်ဟင်းခါး အရမ်း ကြိုက်တာဆိုတော့ မုန့်ဟင်းခါး ရှိတဲ့ နေရာကိုပဲ ပထမဦးဆုံး နှစ်ယောက်အတူတူ လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြတယ်။ နှစ်ယောက် ဆိုပေမဲ့လည်း တစ်ပွဲတည်းသာ ယူခိုင်းလိုက်မိတယ်၊ ဇွန်းဆိုရင်လည်း တစ်ချောင်းတည်း၊ လူတွေနဲ့ အတူတူစားရတဲ့ အကျင့်ကို ကျွန်မ မကြိုက်ပေမယ့် ကိုနဲ့တော့ ကျွန်မ အတူတူ စားရတာ မက်မောတယ်။ ကျွန်မကို အမြဲတမ်း ခွန့်ကျွေး တတ်တဲ့ ကို့ကို ကျွန်မ အခုအချိန်မှာ အရမ်းကို လွမ်းမိနေပြီ။ ကြင်နာမှု အပြည့်နဲ့ အမြဲတမ်း ညောင်းတယ် ဆိုရင်တောင် အဝေးက လာတဲ့ ကိုက ကျွန်မကို ပြန်နှိပ်ပေးခဲ့တယ်။ အရာရာ အားလုံး ကျွန်မ မျက်နှာ တစ်ချက်တောင် အညှိုးမခံခဲ့တဲ့ ကို့ကို ကျွန်မ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ မေ့နိုင်မှာလဲ?
အလှူ ပွဲက အပြန် ကိုက ကျွန်မအတွက် Valentine လက်ဆောင်လေး ပေးချင်တယ်ဆိုပြီး ပန်းခြံ တစ်ခုကို ခေါ်သွားတယ်။ ပန်းခြံ ပေါ်က ခုံတန်းလေး ပေါ် ရောက်ရောက်ခြင်း ကျွန်မကို အသာအယာ ဆွဲယူပြီး ဖက်ထားလိုက်တာ အချိန် ဘယ်လောက် ကြာသွားလဲ မသိလိုက်ဘူး။ ကို့ရဲ့ အစ်ကို ဖုန်းခေါ်သံ ကြားမှပဲ ကျွန်မတို့ ရုတ်တရက်ကြီး လန့်နိုး လာတယ်။ ဖုန်း သွားပြောပြီး ပြန်လာလာချင်း ကျွန်မကို Valentine အနမ်းတစ်ခု ပေးပြီး နှစ်ယောက်သား ရင်ခုန်သံတွေ ဖလှယ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ Valentine အနမ်းကို ကျွန်မ အခုထက်ထိ သတိရမိနေတုန်းပဲ။ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ပန်းခြံထဲမှာ ကို့ရဲ့ "အခုမှသတိရတယ်၊ ချစ်လေးကို လက်ဆောင်ပေးရဦးမယ်" ဆိုတဲ့ စကားသံလေးက တိုးနေပေမယ့် ကျွန်မရင်ထဲမှာတော့ အရမ်းကို ကျယ်လောင် နေခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ "မျက်လုံးမှိတ်ထား" ဆိုလို့ ကျွန်မ မျက်လုံးတွေကို မှိတ်ထား လိုက်ရတယ်။ တစ်ချွတ်ချွတ် မြည်နေတဲ့ အသံလေး တွေကို နားဆွင့်ရင်း ကျွန်မ ရင်ခုန်စွာ စောင့်မျှော်နေဆဲမှာ ကိုက ကျွန်မရဲ့ နဖူးလေးကို တစ်ချက် နမ်းလိုက်တယ်။ ကျွန်မ ရင်တွေ အရမ်း ခုန်နေခဲ့တယ်။ "ကိုက ဖွင့်လို့ ရပြီ" ဆိုလို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖွင့်ကြည့် လိုက်တော့ ကိုက ကျွန်မရှေ့မှာ ဒူးထောက် ရက်သား၊ လက်ကိုလဲ နောက်ပစ်လို့။ လက်ကို ရှေ့ထုတ်လိုက်တော့ အသည်း အနီရောင် ပိတ်သေတ္တာလေး တစ်ခုကို ကိုင်ထားတဲ့ ၀က်ဝံရုပ်လေး။ သေတ္တာလေးကို ဖွင့်လိုက်တော့ ဆွဲကြိုးလေး တစ်ကုံး ထွက်လာတယ်။ ကိုနဲ့ဆင်တူ ဆွဲကြိုးလေး။ ကို့ရဲ့ ဆွဲသီးလေးက ၀က်ရုပ်ကလေး၊ ကျွန်မရဲ့ ဆွဲသီးလေး ကတော့ မြွေရုပ်လေး။ အရင်လကမှ ကျွန်မကို ၀ယ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ကတိပေးထားတဲ့ ဆွဲကြိုးလေးဖြစ်နေတော့ ပိုပြီး ၀မ်းသာမိတယ်။ ကို ကိုယ်တိုင် ဆွဲကြိုးလေးကို ယုယစွာ တပ်ဆင် ပေးခဲ့တယ်။ "ထာဝရ သိမ်းထားနော်" လို့ ကျွန်မ နားထဲကို တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်သေးတယ်။ "အင်းပါ" လို့ ကျွန်မက ကတိပေးခဲ့တဲ့ အတိုင်း ကျွန်မဆီမှာ အခုအချိန်ထိ ဆွဲကြိုးလေး ရှိနေဆဲပါ။ အခုထက်ထိ ၀က်ဝံလေးရဲ့ အသဲထဲမှာ ရှိနေသေးတယ် ဆိုတာ သိခဲ့ရင် ၀မ်းသာမှာလား?
ညနေစာကို စားသောက်ဆိုင် တစ်ခုမှာ အတူတူ စားပြီးမှာတော့ အချိန်က ခြောက်နာရီ ထိုးနေခဲ့ပြီ။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ တစ်သက်တာ မမေ့နိုင်တဲ့ "ပထမဦးဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံး ချစ်သူများနေ့" က ရင်ခုန်သံတွေ အပြည့်နဲ့ ကုန်ဆုံး ခဲ့တယ်။ "နောင်နှစ် ချစ်သူများနေ့ကို အမြန်ဆုံး ရောက်ရပါစေ လို၏" လို့အဲ့ဒီ "ချစ်သူများနေ့"မှာပဲ ကျွန်မ ဆုတစ်ခု တောင်းမိခဲ့တယ်။ ကျွန်မ တစ်နှစ်ပတ်လုံး တောင်းတ ခဲ့ရတဲ့ "ချစ်သူများနေ့" ရောက်ရှိ လာချိန်မှာတော့ ကိုက ကျွန်မအနားမှာ မရှိတော့ဘူး။ ကိုက တခြား တစ်ယောက်နဲ့ အတူ ရှိနေရပြီ။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်ကို ကို့အိမ်က လုံးဝ သဘောမတူပဲ ရက်ရက်စက်စက် စီစဉ်ခဲ့တယ်။ တခြား တစ်ယောက်နဲ့ ကို့ကို အတင်း စေ့စပ် ပေးခဲ့တယ်။ "စေ့စပ်ပြီးတာ ဟုတ်ပါတယ်" ဆိုတဲ့ စကားကို ဖုန်းပေါ်မှာ ကို့ပါးစပ်ကနေ ကျွန်မ ကြားလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်မ လုံးဝ ပြိုလဲ သွားခဲ့တယ်။ ပြင်းထန်စွာ ရွာသွန်းနေတဲ့ မျက်ရည်မိုးတွေဟာ အခုထက်ထိ မရပ်နိုင်သေးဘူး။ ရင်ထဲက နာကျည်းမှုတွေ အခုထိ ခက်ထန်နေဆဲပဲ။ ခါးသီးမှုတွေက အိမ်မက်ဆိုးလို ညတိုင်း ခြောက်လှန့်နေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်မ စောင့်မျှော်နေခဲ့ရတဲ့ Valentine ကတော့ မထင်မှတ်ပဲ Bleeding Valentine ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
ကျွန်မ ကို့ရဲ့ မိသားစုထဲ ၀င်ရင် ကျွန်မ စိတ်ဆင်းရဲရမှာ ကို တွေးပူလို့ ဒီလမ်းကို ရွေးချယ်ခဲ့တာလား? ကျွန်မ အခု ခံစား နေရတာတွေထက် ကိုက အစပေါင်း များစွာ ခံစားနေရမယ် ဆိုတာ ကျွန်မကို မပြောပြပေမယ့်လဲ ကျွန်မ နားလည်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် လမ်းခွဲလိုက်ရပေမယ့် ကျွန်မ ရင်ထဲမှာ အမြဲတမ်း ရှိနေတယ့် ကို့ကိုတော့ ကျွန်မရဲ့ "တစ်သက်တာ ချစ်သူ" အဖြစ် ဆိုင်းဘုတ် ထောင်ထား လိုက်ပြီ။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကိုပြန်လာခွင့် ရခဲ့မယ် ဆိုရင်၊ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် ပြန်ပြီး စုံစည်းခွင့် ရှိဦးမယ်ဆိုရင်၊ အဲ့ဒီ အချိန်လေးကို ကျွန်မ ဘ၀တစ်ခုလုံး မျှော်နေ ချင်သေးတယ်။ ဒီဘ၀မှာ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် ချစ်သူအဖြစ် စုံစည်းခွင့် မရှိတော့ဘူး ဆိုရင်တောင် ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် နောင်ဘ၀မှာ ပြန်ပြီး ဆုံစည်းခွင့် ရချင်သေးတယ်။ ဒီဘ၀မှာ ရှိနေတဲ့ ၀ဋ်ကြွေးတွေကို ဒီမျှနဲ့သာ ကျေပါစေတော့လို့ ဆုတောင်းလျှက်..
အဲလက်စ်ရဲ့ မြတ်နိုင်းခွင့် ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကတော့ ကျွန်မကို အမြဲဆိုပြလေ့ရှိတဲ့ ကိုနဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံး သီချင်းလေးပါ။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် အရမ်းကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့ သီချင်းလေး ရဲ့ "တကယ်ဆို မင်းမရှိတဲ့ နေရာမှာ မနေတတ်တာ၊ မှားများမှားနေလား? မှားလဲ မှားပါစေတော့ အချစ်လေးရာ" ဆိုတဲ့ သီချင်း ဇာတ်သိမ်း စာသားလေး အတိုင်း ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ဟာ ဇာတ်သိမ်းသွားခဲ့မယ်လို့ ကျွန်မ အခုအချိန်ထိ မယုံနိုင်သေးဘူး။
Remark: The Above Article is written by ထာဝရ, and published by Myhome16.
ရေးသားသူ Tea at 1:30 AM 15 တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် Article, Love, Valentiine, ချစ်သူများနေ့, အချစ်, ဆောင်းပါး
ဒီနှစ် ချစ်သူများနေ့ Valentine Day မှာ ထူးထူးခြားခြားလေး ဖြစ်သွားအောင် Myhome16က မောင်နှမတွေ အားလုံး အတူတူ ပိုစ့်လေး တစ်ခု လုပ်ပြီး တင်ဆက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒီနှစ် ချစ်သူများနေ့က Myhome16 က မောင်နှမ ၇ယောက်လုံးအတွက် သိပ်ပြီး ရင်ခုန်စရာ ကောင်းတဲ့ ချစ်သူများနေ့ မဟုတ်နေဘူး။ ချစ်သူနဲ့ ဝေးတဲ့လူက ဝေးနေတယ်။ အတိတ်က ချစ်သူကြောင့် အခုထိ မပျော်နိုင်တဲ့ လူတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ Imaginary အချစ်ပိုင်ရှင်ကလည်း တစ်မျိုး။ ပိုဆိုးတာက ထမင်းငတ်တဲ့လူကလည်း ရှိသေးတယ်။ နောက်ထပ် ချစ်သူများနေ့ကို ရင်မခုန်ပါဘူးဆိုတဲ့ လူကလည်း ရှိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ခံစားချက်တွေ က တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မတူနေပေမယ့် အားလုံးကို ခြုံပြီး ပြောရရင် ယခုနှစ် Myhome16 ရဲ့ Valentine Day ခံစားချက်ကတော့ ....
အတိတ်ကို ပြန်လှည့်ကြည့်တိုင်း ငါမင်းကိုသတိရတဲ့ သွေးနွေးနွေးလေး စီးဆင်းတယ်။
ပန်းတွေ တစ်ရာသီပြီး တစ်ရာသီ ဖူးပွင့် ဝေဆာခဲ့ပေမယ့်
ရင်ထဲက ပန်းတစ်ပွင့်ကတော့ ဖူးပွင့်မလာခဲ့ဘူး။
တစ်ကြိမ်တစ်ခါ မက်ဖူးတဲ့ အိပ်မက်ဆိုပေမယ့် အခါခါနစ်မွန်းခဲ့ပေါ့...
ချစ်သူများနေ့မှာ ချစ်သူနဲ့ အတူမရှိနေပေမယ့် အရင်က အတူရှိနေခဲ့တဲ့ ချစ်သူများနေ့ကို သတိရမိတယ်။ ချစ်သူနဲ့ ကွေကွင်းရခြင်း ဆိုတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ဘယ်တော့မှ မခံစားရဖို့ ဆုတောင်း တတ်ပေမယ့် ဆုတောင်းက မပြည့်သေးဘူး။ လွယ်လွယ်နဲ့ သတိမရအောင် အမြဲ ကြိုးစားနေပေမယ့် မအောင်မြင်သေးဘူး။ ရင်ထဲမှာ အတိတ်ရဲ့ နွေးထွေးမှုတွေ၊ ပစ္စုပန်ရဲ့ ခါးသီးမှုတွေ၊ အနာဂတ်ရဲ့ အေးချမ်းမှုတွေက ရောထွေး စီးဆင်းနေတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀မှာ နာရီတိုင်း မိနစ်တိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ခံယူချက်တွေနဲ့ အနာဂတ်ခရီးအတွက် အားနဲ့အင်နဲ့ လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ အဓိက အကြောင်းတစ်ခုက မင်းပဲ ဆိုလည်း မှားမယ် မထင်ဘူး။
ဖေဖော်ဝါရီရောက်ရင် ရင်ခုန်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် Valentine's day ကြောင့် ရင်ခုန်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဖေဖော်ဝါရီလက ငါ့တို့ ရဲ့ လွတ်လတ်ရေး ဖခင်ကြီး မွေးနေ့မို့ အသိအမှတ် ပြုဂုဏ်ယူမိတယ်။ ကမ္ဘာမြေပေါ် သူရဲကောင်း တစ်ယောက် ပေါ်ထွန်းခဲ့လို့ ကျေနပ်မှု တွေကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီကို ရင်ခုန်တယ်။ နောက်တစ်ယောက်က ဘယ်တုန်းက မှ တိုင်းပြည် အပေါ် လူမျိုး အပေါ် မှာငဲ့ညှာ မစဉ်းစား ခဲ့တဲ့ လူယုတ်မာ သန်းရွှေ မွေးနေ့အတွက် ဒေါသ ဖြစ်မိတယ်။ နောက်တစ်ယောက်က ကျေးဇူးရှင် အနန္တဂိုဏ်ဝင် ဖေဖေ က လည်း ကျမ ဘ၀ရဲ့ သူရဲကောင်း တစ်ယောက် အဖြစ် ရှင်သန်ခဲ့တဲ့လ။
အော်….အချစ်……ကိုယ့်ကို ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်တာလည်းမင်း၊
ကိုယ့် နှလုံးသားကို ဒဏ်ရာရအောင်လုပ်တာလည်းမင်း၊
မင်းဟာ တစ်ခါတစ်ရံ ပန်းဖူး ပန်းငုံလေးလို ချစ်စရာကောင်းသလို
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း နာဂစ်(စ)မုန်တိုင်းလို ၀င်မွှေတတ်တယ်နော်…
မင်းက ငါ့ကို နွယ်ပင်လို ပြန်ပြီး ရစ်ပတ်ပြန်တယ်……
အော်……ငါကလည်း ပုထုဇဉ်လူသား တစ်ယောက် ပေကိုး….
သြော်... ချစ်တယ်. ချစ်တယ်. ချစ်တယ်. အရမ်းချစ်တယ်.. အလွန်ချစ်တယ်.. သေမတတ်ချစ်တယ်. ချစ်တယ်. ချစ်တယ်. ချစ်တယ်. သြော်... ကောင်း၏။
ကျုပ်အချစ်က မဟာတံတိုင်းထက် ခိုင်မြဲတယ်။ ထိုင်ပေ ၁၀၁ တာဝါထက်မြှင့်တယ်။ ဘေဘီလုံ ဥယျာဉ်ထက် အေးမြတယ်။ လေဘာတီရုပ်ထုလို လွတ်လပ်မှုတွေ သယ်ဆောင် ပေးမယ်။ အိမ်ဖြူတော်ထက်လည်း ဖြူစင်တယ်။ ဘယ်ဟာနဲ့မှ နှိုင်းလို့မရအောင် မင်းကို ချစ်တယ်။ ကျုပ်ဘယ်လောက် ချစ်နေနေ... ခက်တာက မင်းက အိပ်မက်ထဲကချစ်သူ ဖြစ်နေတော့...
သတိရနေတယ်။ ဘာတွေ ဘယ်လိုပဲ ပြောင်းနေပါစေ။ ရှင် ကျမကို ဘယ်လိုပဲ ရက်စက်ခဲ့ပါစေ ရှင့်ကိုပဲ အမြဲတမ်းတမ်းတတချစ်နေမယ်။ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါဆီက ကဒ်တွေ ပန်းစည်းတွေ ချောကလက်တွေပဲ ရနေရနေ အားလုံးဟာ ဆေးမရေးရသေးတဲ့ ပိတ်သားပြင်လို ခံစားချက်မရှိ ဗလာနတ္တိဖြစ်နေတာလေ။ ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာ ကျမ တစ်ကိုယ်တည်းသမား ဖြစ်နေလို့ ၀မ်းမနည်းပါဘူး။ ရှင့်ဘေးနားမှာ ကျမမရှိဘဲ ရှင်တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်နေတာကိုပဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။
အချစ်ဆိုတာမျက်စိမပါဘူးလို ကျွှန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ မျက်စိမပါသောအချစ်ကလည်းကြာကြာခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွှန်တော်ကတော့ ၁၅၀၀အချစ်ဆိုတဲ့ အရာ သွင်ပြင် မရှိသော အရာလို့မြင်တယ်။ ကိုင်လို့မရပေမဲ့အေးချမ်းမှု ပေးနိုင်တယ်။ အေးချမ်း ပေမဲ့ရင်ကိုပူလောင်စေတယ်။ စိတ်ကိုလှည့်စားနိုင်ပြီး လူ၏စိတ်ကို အလိုလိုပျော်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ကျွှန်တော့်အတွက်တော့ အကောင်းဆုံးအချစ်ကတော့ အချင်းချင်းနာလည်မှုပေးရှိချင်းပါဘဲ။ ဒါမှကြာရှည်တည်မြဲမှာပါ။ ဒီ Valentine day ကတော့ ကျွှန်တော် ထမင်ငတ်တဲ့နေ့ပါဘဲ။
2009 ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄မှာ ကျရောက်လာသော ချစ်သူများနေ့မှာ အားလုံး ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ Myhome16 Family မှာ ဆုမွန်ကောင်း ပို့သလိုက်ပါသည်။
ရေးသားသူ Tea at 12:08 PM6တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် Love, Valentine, ချစ်သူများနေ့
Tea: ဟေး မေသူ
ဒီနှစ် ချစ်သူများနေ့မှာ ဘာအစီအစဉ်တွေရှိသလဲ?
မေသူ: ထွေထွေထူးထူးတော့ မရှိပေမယ့် ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့သူတွေအကြောင်းတော့ တွေးနေမိတယ်။ မင်းကေ၇ာ?
Tea: တစ်ကိုယ်တည်း သိုင်းကျင့်နေတယ်
မေသူ: အချစ်သိုင်းလား :)
Tea: ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ လူတွေ အကြောင်းတော့ သိပ်စိတ်မ၀င်စားဘူး။ ချစ်သူများနေ့ဆိုတော့ အဓိကဖြစ်တဲ့ ချစ်သူကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။
မေသူ: အယ်။ ချစ်သူများနေ့ဆိုတာ သမီးရည်းစားတွေကို ဘဲ ရည်ရွယ်တာမှ မဟုတ်တာ။
Tea: အင်းလေ.. ဒါပေမယ့် Main Target ကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်လေ :)
မေသူ: ဒါဆိုတော်က စဉ်းစားရမယ့် ချစ်သူရှိတယ်ပေါ့ အဲလိုလား
Tea: မေသူ့ကို မေးနေတာလေ.. မျှားဦးကို ဘာလို့ လှည့်နေတာလဲ
equal right လေ
Tea: ကယ် ရှိတယ်ဟာ၊ ရှင်းရော :D
မေသူ: ဟီး ပေါ်ပြီ
Tea: ဒါပေမယ့် မိုင်တွေ ထောင်ချီဝေးနေတယ် ဆိုတော့ ချစ်သူများနေ့မှာ ဘာမှ မထူးပါဘူး။ :(
မေသူ: ကိုယ်တို့ဝေးနေ မိုင်ပေါင်းကုဋေသီချင်းဆိုနေပေါ့
Tea: ဒါနဲ့ ကျုပ်ကိုချည်းပဲ မေးခွန်းထုတ်မနေနဲ့။
မေသူ့ ချစ်သူအကြောင်း သိချင်တယ်။ ပြီးတော့ ချစ်သူများနေ့ အစီအစဉ်။
ကျုပ် ချစ်သူ ကျုပ်ကို ၁၂ ကျော်တော့ ဖုန်းခေါ်တယ်
Tea: ဟုတ်တယ်? ဘာတဲ့လဲ? How Are You တဲ့လား? :D
မေသူ: ဒီနေ့ ဘာအစီစဉ်ရှိလဲတဲ့....
Tea: အဲ့တော့ မေသူက ဘာပြန်ပြောလိုက်လဲ?
မေသူ: ဘာမှမရှိဘူး ကျောင်းပိတ်လို့အိပ်မယ် လို့ ပြောလိုက်တယ်
ဒါနဲ့ သူက ဘာမှ မပြောဘူးလား
မေသူ: မပြောပဲ နေမလား
အဲတော့ မေ နဲ့ကိုယ်တို့ အမှတ်တရ တော့ရှိသင့်တာပေါ့တဲ့
Tea: ဇာတ်လမ်းက ကောင်းလာပြီ
ကိုယ် ဟိုနေ့က ပို့လိုက်တယ်တဲ့လေ။
Tea: ဒါဆိုရင်တော့ ညာပြောတာပဲ ဖြစ်ရမယ်
မေသူ: အခု အခန်းတံခါးသွားဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့
Tea: ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ တွေ့ေ၇ာလား
အိမ်ဘေးက ခွေးက အထုပ်ဖြေပြီး ပွဲတော်တည်နေတယ်
Tea: မပြောလိုက်ဘူးလား.. နောက်တစ်ခု ချက်ချင်းပို့ဆိုပြီး
မေသူ: ကိုယ်တို့က မိုင်ပေါင်းထောင်ချီဝေးနေတယ်လေ
Tea: မိုင်ပေါင်းကုဋေ သီချင်းတူတူဆိုလို့ရပြီ :D
မေသူ: အီကဒ်လေးတော့ ခွေးစုတ်က စားမသွားရှာဘူး
မေသူ: ဒီထက် မကချစ်တတ်ပြီး နားလည်တတ်အောင် ကြိုးစားသွားမယ် တဲ့.....
Tea: ဟာ!! ဒါပဲလား?
အချစ်ကို မကိုးကွယ်တတ်ဘူး နားလည်းမလည်တတ်ပေမယ့် မေ ကို တော့ ကိုယ်ကိုးကွယ်တယ် နားလည်တယ်တဲ့
ဒေါသဖြစ်လာရင်လဲ အထု အထောင်းခံပါတယ်တဲ့
Tea: ဘာတဲ့တုန်း မပြီးသေးဘူးလား :D
မေသူ: Next Valentine's is going to be our wedding !!!
ဆက်မရတဲ့အပြင် အပိုင်းအစတွေပါ ရှာမရတော့ဘူး။ ဒုက္ခပဲ..
မေသူ: ဒါတောင် သူက မြန်မာ စကားသိပ်မကျွမ်းလို့ :P
Tea: ဒါနဲ့ ကတ်ဆိုလို့ အခုနက ကျုပ်လဲ မေးလ်တစ်ခု ပို့လိုက်သေးတယ်
စာအိတ်ထဲမှာ စာ အနည်းငယ်ရယ်.. ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရယ်.. စီဒီတစ်ချပ်ရယ် ပါတယ်
မေသူ: အလဲ့ လုပ်ပါအုံး ဘာစာတုန်း
Tea: စာကတော့ ကဗျာတိုလေးပါ.. ရှုပ်တာတွေ မကြိုက်တတ်လို့ ၅ကြောင်းထဲပဲ ရှင်းရှင်းလေး ရေးလိုက်တယ်
Moon proves my Love.
စီဒီလေးကို ဖွင့်လိုက်ရင်တော့ Moon Proves My Love ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးက ပေါ်လာမယ်
Tea: ဓာတ်ပုံကတော့ ကိုယ်တိုင် နာရီနဲ့ ချီကြာပြီး လုပ်ထားရတဲ့ ဓာတ်ပုံလေ။
စာရယ်၊ ဓာတ်ပုံရယ်၊ စီဒီရယ်၊ အဲ့ဒီ ၃ခုပေါင်းပြီး ပို့လိုက်တယ်
Tea: ထင်ရဘူးလား? ဟားဟား :)
စိတ်လေတာက ချစ်သူများနေ့မှာ တစ်ကိုယ်တည်း သိုင်းကျင့်နေရတာပဲ
Tea: ချစ်သူများနေ့မှာ အမုန်းသိုင်းကျင့်ရတယ်လေ.. မသိဘူးလား
လွယ်လွယ်နဲ့ မုန်းတတ်အောင် ကျင့်ကြံအားထုတ်နေတာ..ဒါမှ မခံစားရမှာ
မေသူ: အဲဒါ မင်းက မုန်းတတ်အောင်ကျင့်ဆိုတာထက်
Tea: ဘာပဲပြောပြော ..
လွယ်လွယ်နဲ့ ဘာလို့ မမုန်းနိုင်ရတာလဲ
မေသူ: မုန်းခိုင်းတိုင်းမမုန်းနိုင်ဘူး (သီချင်းတောင်ရှိသေးတယ်)
Tea: ဒါနဲ့ ဒီဖေဖော်ဝါရီလ ချစ်သူများနေ့ မှာ ထူးခြားတဲ့ ခံစားချက်တွေ မရှိဘူးလား
မေသူ: ရှိတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီကို Valentine's day ကြောင့် ရင်ခုန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး
ဖေဖော်ဝါရီလ က ငါ့တို့ ရဲ့ လွတ်လတ်ရေးဖခင်ကြီးမွေးနေ့မို့ အသိအမှတ်ပြုဂုဏ်ယူမိတယ် ကမ္ဘာမြေပေါ်သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပေါ်ထွန်းခဲ့လို့ ကျေနပ်မှုတွေကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီကို ရင်ခုန်တယ်။ နောက်တစ်ယောက်က ဘယ်တုန်းက မှ တိုင်းပြည် အပေါ်လူမျိုးအပေါ် မှာငဲ့ညှာ မစဉ်းစားခဲ့တဲ့ လူယုတ်မာသန်းရွှေမွေးနေ့အတွက် ဒေါသဖြစ်မိတယ်။နောက်တစ်ယောက်က ကျေးဇူးရှင် အနန္တဂိုဏ်ဝင် ဖေဖေ က လည်း ကျမ ဘ၀ရဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက် အဖြစ် ရှင်သန်ခဲ့တဲ့လ။
Tea: ဖေဖော်ဝါရီကို Valentine ကြောင့် ရင်ခုန်တာမဟုတ်တဲ့ မေသူကိုတော့ လေးစားသွားပြီ။ အခုခေတ်မှာ လူငယ်တွေက ဖေဖော်ဝါရီဆိုရင် "ဘက်လက်တန်း" ခေါ် Valentine ကိုပဲ မြင်တာလေ။ တခြားဟာတွေ သိပ်မြင်တတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ အမြင်က ကွယ်ခံထားရလို့ပဲလား၊ တကယ်ပဲ မမြင်ကြတော့တာလားတော့ မသိပါဘူး။
Tea: ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့လား ... ချစ်သူများနေ့ကို ကြိုဆိုတဲ့ အနေနဲ့ ချောကလက်တွေ စားရအောင် :D
မေသူ: အင်း မဆိုးဘူး။ ငါ့ချောကလက် ခွေးဆွဲသွားတာနဲ့ အတော်ပဲ။
ဘာချောကလက် အမျိုးအစားတုန်း :P
Tea: ရော့ - စပယ်ရှယ် အင်မတန် Romantic အဖြစ်ဆုံး ...
ပြီးတော့ - Valentine Day မှာ ချစ်သူတွေကို ပေးဖို့ အသင့်တော်ဆုံး ...
စားလိုက်ရင်လည်း အင်မတန် Romantic ဖြစ်ဆုံး ...
ပုံသဏ္ဍာန်ကလည်း မတရား Romantic ဖြစ်လှတဲ့ ....
ဒီတစ်ခေါက် စကားဝိုင်းကိုတော့ ဒီတင်ပဲ ရပ်နားခွင့်ပြုပါ။
အားလုံးပဲ ချစ်သူများနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
Tea + မေသူ
ရေးသားသူ Tea at 5:25 AM3တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် Love, Valentine, စကားဝိုင်း
ငယ်ငယ်ကတော့ ကျောင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကဗျာလေး ကို ရွတ်ရတယ်။
မိခင် ဒေါ်စုသား ...
ဒါပေမယ့် အခု ဒီကဗျာကို ကျောင်းတွေမှာ မသင်ရတော့ဘူး။ ကျွန်တော်တော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပညာရေးကို အရမ်း စိတ်ပူမိတယ်။ ပညာရေးဆိုတာ တိုင်းပြည် တစ်ခုရဲ့ အခြေခံ အုတ်မြစ်တစ်ခု ဆိုလည်း ဘယ်မှားလိမ့်မလဲ။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ပညာရေး စနစ်ကြီးမှာ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အမှန်တရားတွေမှ အများကြီးပဲ။ နောင်လာ နောင်သားတွေ သိသင့် သိထိုက်တဲ့ အချက်တွေ အားလုံးကို ဖိနှိပ်ထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့တတွေ အတတ်နိုင်ဆုံး လူတွေကို ပညာပေးဖို့ လိုအပ်တယ်။ ပါးစပ်က ပိတ်မထားပါနဲ့။ မသိရင်မေးပါ၊ မတတ်ရင် သင်ပါ။ နားမလည်ရင် နားလည်အောင် လုပ်ပါ။ "မသိ၊ မနားလည်၊ မတတ်" တဲ့ လူတွေကိုလည်း အထင်မသေးပါနဲ့။ သူတို့တတွေကို သိသွား၊ နားလည်သွား၊ တတ်သွား အောင် ကူညီပါ။
ဒီနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ တစ်ဆယ့်သုံး၊ ကျွန်တော်တို့တတွေ အားလုံး ချစ်ခင် လေးစားကြတဲ့ မျိုးချစ် ဇာနည်ကောင်း တစ်ဦးကို မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ နေ့မြတ်တစ်ရက်။ တိုင်းသူပြည်သား တွေအပေါ်မှာ ဖခင်တစ်ဦးသဖွယ် သွန်သင်ခဲ့တယ်။ အားထုတ်ခဲ့တယ်။ ပညာတွေ ပေးခဲ့တယ်။ တစ်ချိန်က ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ဦး။ ယခုအချိန်ထိလည်း အားလုံးက လေးစားနေကြဆဲ ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ....
တစ်ချိန်ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ထိပ်ကနေ ဦးဆောင်ပြီး လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လို့ ပြောလိုက်ကြရင် လူတွေက "အခုအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ရှိနေရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ" "ဗိုလ်ချုပ်သာ အခုရှိနေခဲ့ရင် အသက် ၉၄နှစ် ရှိပြီ" "သူသာ ရှိနေခဲ့ရင် ဒီနေ့ ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေမှာ မဟုတ်ဘူး" ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကို တွေးတတ်ကြတယ်။ လက်ရှိ အခြေအနေမှာ ညီညွတ်ခြင်းနဲ့ စည်းလုံးခြင်းတွေက အပေါ်ယံ လှုပ်ရှားမှုတွေထက် ပိုပြီး အရေးကြီးနေတယ်။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အားထားရမယ့် ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး လိုအပ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအခြေအနေမျိုးမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကို "တ" နေရုံနဲ့ မဖြစ်သေးဘူး။ ခေါင်းဆောင်လို့ ပြောလိုက်ပြန်ရင်လည်း လူတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို "တ" မိပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်က အားလုံးကို "အဆိုးဆုံး အတွက် ပြင်ဆင်ထား" လို့ ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ တစ်ဖက်က တွေးကြည့်ရင်လည်း ဘယ်သူတွေ ရှိသေးသနည်း။ ခေါင်းဆောင်မရှိ အခြေအနေကို ရောက်နေပြီလော။ ဒါကို ပြောရင် လူတွေက ပြောကြပြန်ဦးမည်။ "လူတိုင်းက ခေါင်းဆောင်ပင် မဟုတ်ပေလော" ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေ ဆင်လက်တွေ ပေးပါလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် "ခေါင်း" ဆိုတဲ့ အရာ မျိုးက လိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်တယ်။ "ခေါင်း" မရှိရင် တစ်ခါတစ်ခါ လုပ်သမျှဟာ လွဲနေ တတ်တယ်။ အားလုံးကို ဒါဟေ့ ဟိုဟာဟေ့ ဆိုပြီး ထိပ်ဆုံးကနေ တစ်တိုင်းပြည်လုံးကို ဦး "ဆောင်" လမ်းပြ နိုင်ရမည့် အပြင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကလည်း အနစ်နာခံပြီး အုပ်ချုပ်နိုင်ရမယ်။ လက်ရှိတော့ ဒီလို လူမျိုး၊ "ဗိုလ်ချုပ်" လို လူမျိုး မရှိသေးဘူး ဆိုတာ အားလုံးရဲ့ စိတ်ထဲမှာလည်း အိမ်မက်ဆိုးကြီး တစ်ခုလို ခြောက်လန့်နေတယ်။
တစ်ဖက်ကလည်း ရန်သူက ပြင်ဆင်မှုတွေ အများကြီး ရှိထားတယ်။ အားလုံးတော့ သိချင်မှလည်း သိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ရေရှည် ခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းဖို့ အတွက် တစ်ဖက်က အစီအစဉ်တွေ အများကြီး ရှိတယ် ဆိုတာ မသိရင် အခုသိသွားပြီလို့ မှတ်လိုက်ပါ။ သူတို့တွေ မဟာဗျူဟာတွေနဲ့ လှုပ်ရှားနေတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီမိုကရေစီ လို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ လူတွေ ကျပြန်တော့ရော ... သူတို့တွေမှာ မဟာဗျူဟာတွေ ရှိထား ပြန်သလား? ဒါမှမဟုတ် "အုတ်တချပ် သဲတပွင့်" လုပ်သမျှဟာ အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီး ဒီအတိုင်းပဲ အော်ကြ ဆဲကြ ရမ်းကြ လုပ်နေတာလား? လုပ်သမျှတိုင်းက အကျိုးမထူးဘူးလို့ ပြောချင်တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ထူးတော့ထူးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ် ကိုယ်တိုင်က "မှာ" ခဲ့ဖူးတယ်။ "လှုပ်ရှားမှုဆိုတာကလဲ စိတ်ပါတော့ ထလုပ်လိုက်၊ စိတ်မပါရင် ဘေးထိုင်နေလိုက်၊ ဒါမျိုးလုပ်လို့ မရဘူး။ စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့က အဖွဲ့လိုက် အချိန်ကိုက် ညီညီညွတ်ညွတ် လှုပ်ရှားရတယ်။ ရေရှည်မှာ မဟာဗျူဟာတွေ နည်းဗျူဟာတွေ လိုတယ်။ ဒါမရှိရင် ခင်ဗျားတို့ကို ရန်သူက အနိုင်ယူသွားမှာပဲ။" ဗိုလ်ချုပ်ပြောသလိုပဲ လူတွေ ငါတို့က ဒီမိုတွေဆိုပြီး ရေရှည်အတွက် သေသေချာချာ မဟာနည်းဗျူဟာတွေ မရှိထားရင်၊ ရှိထားခဲ့ရင်လည်း အကျိုးမထူးတဲ့ဟာတွေ ရှိထားနေရင် နောင် အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်လာဦးမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစား ထားသင့်တယ်။ "ငါတို့က အစိုးရ မကောင်းကြောင်း ပြောတယ်ဟေ့။ ဒါကြောင့် ငါတို့ မှန်တယ်။ ဟုတ်တယ်။ ငါတို့ လုပ်သမျှ မှန်တယ်၊ ပြောသမျှ မမှားဘူး။" လုပ်တိုင်းမှန်တယ်၊ ပြောတိုင်းမမှားဘူး ဆိုတာကလည်း တကယ်တော့ လက်တွေ့မှာ ဟုတ်ချင်မှလည်း ဟုတ်လိမ့်မယ်။ လူဆိုတာ တစ်ဖက်တည်း မြင်တတ်ရင်၊ တခြား တစ်ဖက်ကို မမြင်တတ်ရင် ဘာဖြစ်တတ်သလဲ?
လူတွေ... လူတွေ... ပြောလိုက်ကြပြန်ပြီ။ လုပ်လိုက်ကြပြန်ပြီ။ အခုလက်ရှိ အခြေအနေ မှာရော "စည်းကမ်း" ဆိုတာကို နားလည်ကြသေးလား။ "စည်းကမ်းသည် လူ့တန်ဖိုး" ဆိုတာကိုရော သတိရသေးလား? တစ်ချိန်လုံး အမြဲတမ်း "သူတို့တတွေ ကြောင့်၊ သူတို့တတွေ လုပ်လို့ မကောင်းဘူး မကောင်းဘူး" ဆိုလို့ အော်နေရုံနဲ့ ဘာမှ ပြီးမသွားဘူး။ ကိုယ်တိုင်ကရော စည်းကမ်း ရှိရဲ့လား ဆိုတာ ပြန်ပြီး သုံးသပ်သင့်တယ်။ မဟာနည်းဗျူဟာတွေနဲ့ စနစ်တကျ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ လျှောက်လှမ်းရမယ့် ဒီခရီးမှာ "စည်းကမ်း" မရှိပဲနဲ့တော့ တီးလိုက်တဲ့ လက်ခုပ်တိုင်းဟာ ကိုယ်တိုင် ကြားရ လောက်အောင်တောင် ကျယ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံတကာ အလယ်၊ အာရှအလယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရပ်တည်မှုက ဘယ်နေရာကို ရောက်နေပြီလဲ? လူတွေက အထင်သေးခံရ တာတော့ မကျေနပ်ဘူး။ မနှစ်သက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်ကလည်း "စည်းကမ်းသည် လူ့တန်ဖိုး" ဆိုတာ အားလုံး အပြည့်အ၀ နားလည် ထားဖို့လိုတယ်။ ဟုတ်တယ်။ အချိန်က စောင့်မနေဘူး။ အချိန်က ပျံသန်းနေတယ်။ ကုန်ဆုံးနေတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်နိုင်ငံကမှ စောင့်မနေဘူး။ ဘေး ပတ်ပတ်လည်က ထိုင်း၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယတို့က အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် နေချိန်မှာ ငါတို့တတွေ ရင်ဘောင်တန်းရမယ့် အချိန်က ဘယ်နေရာမှာလဲ?
"ဟာ ဒီလူကြီးက ပြောသမျှ မကောင်းတာတွေ ကြီးပါလား၊ စိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေ ကြီးပါလား" ဆိုလည်း ကျွန်တော် ရဲရဲကြီး အပြောခံရဲတယ်။ အားလုံး အခြေအနေအမှန်ကို နားလည် ထားသင့်တယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မကြံ့ခိုင်သေးပဲ အဆင့်ကျော်တက်ပြီး လုပ်နေရင်လည်း "သဲထဲရေသွန်" ဆိုတာ ဒါမျိုး မဟုတ်ပေဘူးလား။ အောက်ခြေက အုတ်မြစ်ကို ကြံ့ခိုင်အောင် ကျင့်ကြံ၊ စည်းလုံးအောင်လုပ်၊ အားလုံးက ထွက်တဲ့ အသံ "တစ်သံ" ထဲ ဖြစ်တဲ့ အချိန်ကျရင် "အောင်မြင်မှု" ဆိုတာ မဝေးတော့ဘူး။ ဟိုနေရာကနေ "တိန်"၊ ဒီဘက်နားက "တောင်"၊ ဟိုထောင့်နားက "ထိဒ်" လုပ်နေရုံနဲ့ "တိန်၊တောင်၊ထိဒ်" ပဲ ထွက်လာမယ်။ တိန်တောင်၊ တိန်တောင် လုပ်နေရုံနဲ့ "ဒိန်းးးးးးးး" ဆိုတာက ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ မြဲမြဲကြီး မှတ်ထားလိုက်စမ်းပါ။
ဖေဖော်ဝါရီ တစ်ဆယ့်သုံးမှာ ကျရောက်လာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ကို လေးစားစွာ အလေးပြုလျှက်
ရေးသားသူ Tea at 7:13 PM 12 တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် Article, Bogyoke Aung San, Politics, Special, ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း, ဆောင်းပါး
ဖေဖော်ဝါရီ (၁၃)တွေ တထပ်ကြီး ၀ုန်းကနဲ့ ကျလာတော့..
လုပ်လက်စတွေ.. ဘာမှ.. ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး..
ဗိုလ်တေဇ..သခင်အောင်ဆန်း..မောင်ထိန်လင်း..အိုမိုဒါမွန်ချိ.. ပဲခူးကဝေ.. အညာသားလေး.. သို့မဟုတ်.. ဗိုလ်ချုပ်
မြေ့နွမ်းပွင့်ဖတ်လေးတဖတ်ကို နံရံပြက္ခဒိန်က ပြန်လန်းတယ်..
၉၃နှစ်တာ ရနံ့ဟောင်းဟာ.. သိန်းသန်းချီမျှော်လင့်ခြင်းတို့နဲ့.. မွှေးဆဲ..
အိမ်မက်ယန္တရားအတွက်.. နှလုံးသားအပိုင်းအစ.. ချောဆီတွေဟာ.. ပစ်ခဲယိုစီးဆဲ..
ဆည်းပူးသိုလှောင်ခဲ့.. အလင်းတောက်တွေဟာလဲ.. လောင်မြဲ.. မြှိက်မြဲ..
လူသားကြီးရေ.. စစ်မှန်လှစွာသော.. ကျွနိုပ်တို့၏.. လူသားကြီးရေ
အတ္တငှတ်တိုင်မှ.. အချဉ်ခံ.. လည်ပတ်ကို.. ဖြုတ်လှည့်ပါ..
တ၀ဲဝဲလှည်နေရုံ.. နွားကလေးတော့.. မဖြစ်လို..
ပရ မြက်ခင်းနုကျယ်မှာ.. ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့.. ရှင်သန်မှုအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့သာ.. လွပ်လပ်မွတ်သိပ်လိုသည်..
၁၃.၀၂.၁၉၁၅ - ၁၉.၀၇.၁၉၄၇
မွေးဖွားခြင်းနဲ့ သေဆုံးခြင်းတခုဆီကို ကျုပ်တို့အားလုံး.. ပိုင်ကြဆိုပေမယ့်..
အဲဒီ ' - ' တုံးကလေးမှာ အသက်ရှုမှုကို.. ပြဌာန်းပုံတွေ.. ကွာတယ်..
ကျုပ်တို့တွေဟာ.. အဲဒီပွင့်ဖတ်လေးရဲ့.. သွေးမှုန်ဥတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့.. မျိုးစိပ်စစ်စစ်တွေပါ့..
ရှေ့မှာ.. ဖေဖော်ဝါရီ (၁၃)တွေ တထပ်ကြီးပဲ..
ဘယ်ဘက်ဒေါင့်အစွန်းက.. အသံလေးကို အတူနားစွင့်....
Note: Special Thanks to သျှင်နေ၀င်းဇော် for sending this ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ poem to me for www.myhome16.com.
ရေးသားသူ Tea at 4:57 PM4တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် Bogyoke Aung San, Poem, ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အမှာစကားတွေ၊ မိန့်ခွန်းသံတွေက ထက်လည်း ထက်သလို အဓိပ္ပာယ်လည်း ရှိလှပါတယ်။ ဖတ်ပြီးလိုက်တိုင်း ဖတ်ပြီးလိုက်တိုင်း အားရှိလာပါတယ်။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ငါတို့တတွေ အများကြီး ကြိုးစားဖို့ လိုနေတာကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိရမိတယ်။ အစဉ်အမြဲလေးစားရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ အမှာစကား တစ်ချို့ကို စနစ်တကျ ပြန်လည် တင်ဆက် လိုက်ပါသည်။
ရေးသားသူ Tea at 9:27 PM 1 တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် Bogyoke Aung San, Politics, Quotes, ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း, အသိမှတ်စု